Sidee ayey u muuqan kartaa Shaxda Kooxda Liverpool kulanka ay wajahayso Shrewsbury Town? – Gool FM
(Liverpool) 03 Feb 2020. Da’yarta Liverpool ayaa heli doonta fursad kale oo ay ku soo bandhigaan awooddooda maadaama ay heli doonaan fursad ay Reds ku matalaan tartanka FA Cup-ka wareeggiisa afaraad oo ay la ciyaarayaan Shrewsbury Town habeenka Talaadada.
Shrewsbury ayaa labo gool oo lagala hormaray ka soo laabatay kulankii lugta koowaad oo ay wajaheen kooxda ka dhisan Merseyside-ka ee Liverpool, xilli ay ciyaarayeen qaar kamid ah xiddigaha kooxda koowaad.
Tababare Jurgen Klopp ayaa horey u xaqiijiyay inaysan jirin ciyaartoy waa weyn oo ka qeyb qaadan doona kulankaan sabab la xiriirta jadwalka kulammada oo dhibaato jir ahaaneed ku noqon karta xiddigaha koowaad ee kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka la sii saadaalinayaa shaxda uu ku soo shir tagi doono macallinka da’yarta Neil Critchley kaasi oo Reds hoggaamin doona kulanka lugta labaad ee ku celiska ah tartanka FA Cup-ka.
Majaladda Mole Sports ayaa sadaal ka bixisay sida Liverpool ay uga hortagi karto kooxda Shrewsbury Town ee halkan hoose ka arag shaxda.